musha 9 Services 9 Gitoqlok
Tora Iyo Plugin
Sarudza Your Support Level
Motio's Soterre, iyo inopa zero touch version control yeQlik Sense, ikozvino yasanganiswa neGitoqlok's. plugin yemahara iyo inoshandura zvinhu zvinoonekwa uye data redha zvinyorwa zvakananga mubrowser yako! Gitoqlok inozivikanwa nekuwedzera mashandiro kuQlik Sense, inosanganisira:
ZSheets thumbnail mutevedzeri
ZTumira mapepa kubva kune akasiyana maficha
ZLoad-script kugovana uye kuendesa
2Tora Iyo Plugin
Gadzira yako wega repository uye nyore kuteedzera shanduko muQlik Sense ine Gitloqlok's vhezheni control. Nekuwedzera bhatani mukati meQlik Sense interface yako, Gitoqlok inokutendera kuti utore zvipfupi uye kurodha zvidhori zvemashiti. Iwe unogona kugovera zvakananga script nenhengo dzechikwata chako kana kushambadza zvakananga kunharaunda yeQlik zviri nyore.
Mapuratifomu anotsigirwa anosanganisira:
Dhawunirodha Iyo Yemahara Plugin
3Sarudza Your Support Level
Gitoqlok Freemium Tsigiro
Gitoqlok Freemium Tsigiro Inosanganisira:
ZTumira matikiti matatu pagore
Gitoqlok Platinum Tsigiro Kutanga Pa
Gitoqlok Platinum Tsigiro Inosanganisira: